umatshini wokucheba irayisi we-paddy irayisi yokutsala ilayisi yexabiso lelona xabiso lentengiso
Umatshini werayisi ojija irayisi usetyenziselwa ukuhombisa irayisi kunye nokugaya., ukugaya, Uvavanyo, ukugqiba, Inkqubo yokwahlulahlula i-bran kwaye iyonke.
1.Umatshini we-paddy huller machine onesakhiwo esihambelanayo kunye nokusebenza okufanelekileyo kunye nokugcinwa.
2.Umatshini wokutsala irayisi uye wakha kwi-blower fan yokususa ulusu,ukugcina irayisi ecocekileyo.
Iinkcukacha zeMveliso yePaddy rice huller kunye nomatshini odityanisiweyo
VTNL series irayisi huller umatshini isebenzisa umgangatho advanced yokugaya technology ngamazwe, ukuba yenye yezona zisetyenziswa kakhulu kwezixhobo zangoku zokusebenzisa irayisi emhlabeni. Rice umatshini hulling iye iingenelo elide, Inomgaqo wenkqubo yokuqhaqhobisa kunye nenkqubo yokugaya, irayisi paddy umatshini hulling ungagqiba hulling, ukugaya, Uvavanyo, ukugqiba, Inkqubo yokwahlulahlula i-bran kwaye iyonke, umatshini wokucheba irayisi we-paddy unezibonelelo zecompact, ukusebenza ngokulula, indawo yokuhlala encinci, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, Inkqubo emfutshane yokuvelisa,ukusebenza okuphezulu,ukunciphisa iindleko zokuphathwa kwengqolowa,
Umatshini werayisi wokugoqa irayisi luhlobo olubanzi lokwenza irayisi edityanisiweyo. UPaddy wayejikeleza esikrinini, isixhobo sokwahlula amandla omatshini kumatshini, irabheli roll husker, ukutywina, ukutshiza komoya, Qhubeka ugqibezela ukusuka kwintlambo yokugrumba ukusebenza komatshini kumashonisa amhlophe,iglasi elungileyo, umququ, amabele, Irayisi iyakhutshwa kumatshini wokucheba irayisi.
I-paddy yerayisi yokuzenzekelayo ngexabiso elifanelekileyo lomxholo weerayisi ongaphantsi, iirayisi ezaphukileyo zokukhanya okuqaqambileyo, ingqibelelo, ukuchaneka kokumakisha ngaphezulu kwesinye. Umatshini wokutswina kwesikhumba selayisi unokusetyenziselwa ukuhambisa i-oats,irayisi hulling.it inokufezekisa ubumhlophe beerayisi kunye nereyithi ephantsi ephukileyo, paddy irayisi umatshini huller lisetyenziswa irayisi yokugaya umgca wemveliso kunye mveliso irayisi yokugaya.
Iimpawu kumatshini irayisi huller
1.Lo matshini weerayisi uxovula ngokulula ukulawula kunye nokulungelelanisa ukumila okuphezulu kunye nokuchanekileyo kwerayisi.
2.Lo matshini weerayisi uxovile uneqondo eliphantsi lokuphuka kwerayisi, ukuphuma kwerayisi okumhlophe, iqondo lobushushu eliphantsi elimhlophe.
3.Umatshini wokulandelela irayisi yokuxhuzula irayisi kunye neemodeli ezahlukeneyo ukuhlangabezana nemfuno yakho.
4.Umatshini ozenzekelayo we-paddy irayisi yokuhluza enezixhobo zombane zangoku kunye nezonxinzelelo olubi lokubonisa.
5.Ixesha elide lenkonzo yokulima irayisi ngomatshini onamaxabiso aphezulu, kulula ukuyigcina kwaye isebenze.
Iiparamitha zobugcisa kumatshini wokuluma irayisi
Ividiyo kaMatshini kaPaddy Rice Huller
Qha ga mshelana nathi ngePaddy rice huller kunye nomatshini odibeneyo wokudibanisa